Ekhaya | Jiabo
UJiabo ukhethekileyo kwimveliso yococeko lwee-napkins, ii-diapers zabantwana kunye neemveliso zococeko kangangeminyaka eli-18.
Ukukhathalela, Thanda umhlaba!
Ukubonelela ngeenkonzo ze-OEM kunye ne-ODM kwimveliso ye-napkins yococeko.
Foshan Jiabo iimveliso zococeko Foshan Co., Ltd. lishishini elikhulu elibandakanyekayo kuphando kunye nophuhliso, imveliso, ukuthengisa kunye neenkonzo ze-OEM / ODM zeemveliso zempilo, iimveliso zononophelo lwabucala zabasetyhini ezinjenge-napkins yococeko, amanabukeni abantwana kunye nemaski yokukhusela.
I-Wipain ye-Napkin ye-pidsictoctor yokhetho oluninzi lwephepha elifanelekileyo kuwe
I-Wivapin ye-Napkin Pars I-Pars, uninzi lweenketho zentengiso yakho
Iipads zokuya ezikhathini, ucoceko lwe-Napkin Pars
Entsha kwisitokhwe uyilo olutsha lwesiko elincinci elincinci elincinci elincinci lomqhaphu we-panty liner
Umnikezeli wee-napkins ococekileyo we-Careboss unabasebenzi beetekhnoloji ekumgangatho ophezulu, iqela le-OEM, elinikezela ngeenkonzo zokumisa ze-OEM / ze-ODM kuyilo, imveliso, ukugcinwa kwempahla kunye nolungiselelo kubathengi. "Ukwenza intsebenziswano yokuphumelela kunye neengqondo zethu".
I-Careboss baby diapers kunye nefektri yococeko ihlala ihambelana nokusetyenziswa kwabathengisi bezinto zokuqala zempahla eluhlaza, ukuseka inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho ukuqinisekisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu. Inkampani ibambelela kubaluleko olukhulu kwimveliso kunye nezinto ezintsha zetekhnoloji, kwaye iphuhlisa "i-napkin yococeko egcweleyo engenakungena" yokubonelela abathengi ngamava amatsha athambileyo, akhululekile kwaye aphefumla.
Umgangatho ophezulu oshushu wokuthengisa ngefoyile ye-aluminium yokupakisha intyatyambo esebenzayo
1.Iipads ezimnandi ziyaphuma! 2.Sanitary pad floding 3. Iziqwenga zelaphu ezicocekileyo ezifanelekileyo phambi kwakho!
Imeko yeTekhnoloji ePhezulu yeQonga Wholesale-Foshan Jiabo Imveliso yoCoceko yaseKhaya, Inc.
I-Jiabo ku-Nombolo 4 kumgangatho we-4, kwiFeknoloji yesithathu, eTagang, e-Baishaqiao, kwidolophu yaseShishan, kwiSithili seNanhai, kwiFoshan City.iPhondo leGuangdong.China iimveliso eziphambili zeQonga leHlelo leTekhnoloji yoNcedo lwe-Foshan Jiabo Le mveliso iyamelana ne-kutu. Iyamelana ne-corrosion ebukho bemichiza ye-machiza kunye ne-inorganic kwaye ayinakuchaphazeleka kukusilela kule meko.
Abavelisi boMzekelo bobuGcisa
UFoshan Jiabo iteknoloji yeemveliso zococeko Co, Ltd yenzelwe ukuvelisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezikhuselekileyo nezisempilweni iminyaka eli-18, zonke iimveliso ziqhutywa ngemigangatho ISO9001, SGS, CE njl.
Eyona ndlela ifanelekileyo yokupeyinta iingcinga zeFactoryPrice-Jiabo
Abavelisi bemveliso yezococeko yabasetyhini iJiabo
ICareboss inabasebenzi betekhnoloji ekumgangatho ophezulu, iqela le-OEM elibonelela ngeenkonzo zokumisa ze-OEM / ODM kuyilo, imveliso, ukugcinwa kwempahla kunye nolungiselelo kubathengi. "Ukwenza intsebenziswano yokuphumelela kunye neengqondo zethu" yifilosofi yethu yeshishini, "Ukhathalelo lwehlabathi, thanda umhlaba" yinjongo yethu, kwaye sizame ukuba ngumgangatho wokushishina kushishino.
Ukuba unayo nayiphi na ingcebiso ngenkonzo yethu, nceda ugcwalise le fomu ingezantsi. Siza kuphendula ngokukhawuleza.